Malaayiin qof muslimiin ah ayaa dhigaya mudaaharaadyo ay ugasoo horjeedaan go'aankii kasoo baxay dowladda Mareykanka ee magaalada Qudus loogu aqoonsaday caasimadda Yahuudda.
Intabadan wadamada caalamka islaamka waxaa shalay ka dhacay mudaaharaadyo cara wata oo lagula safanayo muslimiinta dhulalka filasdiin oo wax kabadan 69 sanadood wajahaya ixtilaal uga imaanaya Yahudda sahyuniyadda.
Dhammaan magaalooyinka dhulalka filasdiin waxaa ka socda dibad baxyo aan kala joogsi laheyn waxaana barbar socda iska hor’imaadyo u dhaxeeya ciidamada Yahudda Sahyuuniyadda iyo shacabka muslimiinta ah.
Wadamada Indonesia,Malaysiya,Turkiga,Pakistan,Iraan,Afghanistan iyo Jarmalka ayay muslimiintu ka dhigeen dibad baxyo ballaaran oo ay ugasoo horjeedaan go’aanki Donald Trump.
Dhammaan wadamada carabta marka laga reebo Baxreyn iyo Sacuudiga waxaa shalay ka dhacay iskuso baxyo lagu diidanyahay in Qudus ay noqoto caasimadda Yahudda.
Muslimiinta wadamada Ciraaq, Masar,Suuriya,Tuunis,Marocco,Aljazaa’ir iyo Muritaaniya ayaa iyana muujiyay carada ay ka qabaan in Qudus lasiiyo Yahuudda waxayna ugu baaqeen muslimiinta caalamka ku nool in ay umidoobaan dagaalka lagula jiro Yahuudda iyo Mareykanka.
Magaalooyinka Qudus,Naabulis iyo Alkhaliil waxaa ku dhaawacmay boqolaal qof kadib markii ciidamada Yahuuddu u adeegsadeen rasaasta nool nool, muuqaallo lagu faafiyay baraha internetka ayaa muujinayay dhalinyaro gacmaha ula tagaya ciidamada Yahuudda waxayna dadku umuuqdeen kuwa aan ka baqeyn cabsi gelinta uga imaanaysa Yahuudda.